Haweeneey si xeeladeysan wiil ay jecleed kaga furtay Marwadiisii.
Gabadh Soomaaliya oo ku nool dalka Holand ayaa shaxdii ugu cusleed ku wajahday wiil reer Xamara oo ay jaceyl weyn u qabtay ka gadaal markii ay ka dhaadhacsiisay inuu shaqo u raadsado dalka Ingiriiska.
Haweeneyda oo lagu magacaabo Xaliimo ayaa ku guuleysatay inay wiilkey jeceshahay u dirto Ingiriiska,waxayna ka gadaal saaxiib la noqotay Marwadii uu qabay ee Caruurta u heysay.
“Xaliimo waxay saaxiib la noqotay gabadhii uu qabay Maxamed ka gadaalna waxay kula talisay inuu adeegyada ka caawiya wiil kale oo ay is yaqiineen,wiilkiina waxay hoos ugu sheegtay inay naagta garoob tahay,una baahan tahay garab iyo gar gaar,nin ka caawiya xagga adeega suuqa iyo gurigga” ayey tiri gabadh la saaxiiba Xaliimo oo qisada kaga sheekeysay Waagacusub.net.
“Waxay igu dhahday wiilka haku caawiyo,waxaad rabtid u dirso aniguna daacad ayaan u qaatay,waxaa dhacday inaan wiilkii xiriir wanaagsan yeelanay,uuna habeen seexday xaafadeeyda,ninkii I qabayna si kedisa ku yimid,ina furay isagoo ku dhawaaqayay,diinlaay baad tahay,nin kale ayaad la seexatay iyo wax la mida “ayey tiri Sacdiyo oo ah gabadha siyaasadda looga qaatay ninkii qabay.
“Wiilka wuu kaalmeyn jiray,ka gadaalna waxay ka dhigatay saaxiib,waxay u sheegtay naagta maleegeysay siyaasadeeda ee Xaliimo,waxay weydiisay goorta uu ka tegayo,waxayna ku dhahday subaxdii shanta iyo wixii ka dambeeyo,markaas ayey wiilkii qabay u dirtay telefoon,kuna dhahday,nacasyahoow naagtii aad qabtay waxaa la nool nin kale oo gurigeeda habeen iyo maalin aan ka bixin ka gadaalna doon ayuu hore ka soo raacay oo aroortii ayuu ku garaacay”ayey tiri Canab oo qisada si hoose kaga hadashay.
“Waxaan u qaadanayaa waaya aragnimo iyo inaysan naag saaxiib gelin,waxaana maleeysan waayay markaan maqlay in Caruurteeyda aabahood guursaday Xaliimo”ayey Sacdiyo ku calaa cashay.
“Naag saaxiib ma gasho laakiin waxay Walaasheey Sacdiyo ku gashay gef inay nin aan qabin,la dhalan seexiso guriga,waxkasta haka dhexeeyaanee maxaa yeelay waa qalad weyn,waana ku gar hadii uu Maxamed yiraa way la jiiftay”sidaa waxaa ku garaabay Hooyo Soomaaliyeed oo diiday in magaceeda la xuso.
Xaliimo waxay qaab diblomaasiyadeysan kaga jawaabtay edeynta Holand hareysay ee la xiriirta inay saaxiibteed qaab dhagareysan kaga furatay ninkii qabay.
“Naf wax jecel ayaan ahay,hadana liqi waysay in naag lala qabo,waxaan ku joogaa gar tilaabo kasta”ayey ku gaabsatay Xaliimo.
C/salaan Cabdulle Calasow
Webmaster: Cabdilaahi Jawhar Cabdi